Chess - Analyze This (Free) 5.2.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2.11 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ဘုတ္ Chess - Analyze This (Free)
Chess - Analyze This (Free) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မျိုးစုံစစ်တုရင်အင်ဂျင်၏တန်ခိုးနှင့်သင်၏စစ်တုရင်ကစားပွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ! သင့်ရဲ့စစ်တုရင်ကွန်ပျူတာနောက်ကွယ်မှ Leave!
/** အင်္ဂါရပ်များ **/
☆ PGN ဖိုင်မှသင်၏ဂိမ်းများကို Load နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ * chess.com, lichess, chess24 နှင့်အခြားအွန်လိုင်းဆာဗာများမှ pgn ဂိမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
verbose အင်္ဂလိပ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်နှင့်အတူလက်ရှိဂိမ်း☆အပြည့်အဝ Engine ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ! Magnus Carlsen, Vishy Anand နှင့်အခြားသခင်၏ဂိမ်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ!
☆ Paste ကို PGN သို့မဟုတ် fen
☆ဝေမျှမယ် PGN / fen သည်အခြားစစ်တုရင် apps များနှင့်အတူသို့မဟုတ်အီးမေးလ် / တွစ်တာမှတဆင့်ပေးပို့
☆သစ်ကို UCI အင်ဂျင်များကိုစီမံကွပ်ကဲခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းပါ။ (Pro ကိုသာ)
iChess, Follow စစ်တုရင် & စစ်တုရင်စာအုပ်လေ့လာမှုအက်ပ်များမှ☆တစ်ခုမှာကလစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ device စောင်းခြင်းဖြင့်ကျောနှင့်ထွက်ရွှေ့ဖို့နယူးဆန်းသစ်အင်္ဂါရပ်☆။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းအချို့ကြွင်းသောအရာပေး,
☆ Engine ကိုဆန့်ကျင် Play သို့မဟုတ်အင်ဂျင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင် (လက်ရှိဘုတ်အဖွဲ့အနေအထား) ကစားပါစေ (Pro ကိုသာ။ option ကိုကြည့်ဖို့အင်ဂျင်အမည်ကိုအသာပုတ်)
သင်္ကေတများနှင့်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ☆ Annotation ဂိမ်း
☆အော်တိုပြန်ကန်ဂိမ်း (Pro ကိုသာ)
☆ကို "ပွင့်လင်းအင်ဂျင်ပုံစံ" ကိုအသုံးပြုဖို့ရာ Komodo 8, Komodo9တူသောအင်ဂျင်ထောက်ပံ့
သင်ကစားပွဲ link ကိုထိပုတ်ပါလာသောအခါ lichess, chess.com, chessgames Browser ကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ, Whatsapp စသည်တို့ကိုမှသင်၏အများပြည်သူဂိမ်း loading များအတွက်☆ပံ့ပိုးမှု
Demo ကိုဗီဒီယို: https://youtu.be/YK78CYOcig8
ပိုပြီး features တွေ, သိကောင်းစရာများနှင့်အကောက်များအတွက်တွေ့ကျေးဇူးပြုပြီး:
♚ vs အခမဲ့ Paid : အခမဲ့ဗားရှင်း (တစ်) ကြော်ငြာ (ခ) သစ်ကို UCI အင်ဂျင် install လုပ်မရနိုငျထားပါတယ် (ဂ) Auto-ပြန်ကန်ရွေ့လျား (ဃ) အော်တိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအချိန်> 5s နှင့် (င) မသတ်မှတ်နိုင်မနိုင်ရှိပါတယ် အချို့သောအခြားအသေးအဖွဲ UI ကိုကန့်သတ်ဂိမ်း browsing နေစဉ်။
♚ဤမိုဘိုင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့စစ်တုရင်ဂိမ်းကစားရန် app တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး
♚ Houdini 3, Rybka, Fritz, Hiarcs တူသောပြင်ပအင်ဂျင်တင်သွင်းခြင်းသည်လက်ရှိတွင်ပံ့ပိုးပေးမထားပါ
♚ pls တွေ့မြင်ပိုအင်ဂျင်ကို download လုပ်ပါရန်:
http://www.stockfishchess.com/ (Stockfish ပင်မစာမျက်နှာ)
G + စာမျက်နှာ: http://goo.gl/Axhm4
Facebook မှာ http://goo.gl/P5TXe အပေါ်လိုပဲ
* မှတ်ချက်: lichess အခမဲ့ open source ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, chess24, chess.com ကဲ့သို့အခြားဆာဗာများ (pgn ဒေါင်းလုပ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်) ကိုတချို့ features တွေဝင်ရောက်ဖို့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပေးဆောင်ခဲ့ကြ
Chess - Analyze This (Free) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Chess - Analyze This (Free) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Chess - Analyze This (Free) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Chess - Analyze This (Free) အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.62k 16.21M
Chess - Analyze This (Free) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Chess - Analyze This (Free) အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.2.11
ထုတ်လုပ်သူ Asim Pereira
App Name: Chess - Analyze This (Free)
Release date: 2019-07-12 14:09:24
လက်မှတ် SHA1: 73:65:A7:A5:46:1B:B3:7C:7F:42:C7:A1:A5:E1:41:33:08:F8:BC:FF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Asim Pereira
အဖွဲ့အစည်း (O): Asim Pereira
Chess - Analyze This (Free) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ